My First Laptop, ပထမဦးဆုံး ကွန်ပြူတာ « Zwe Hlaing Bwa
« OX Year Horoscope for Snake
PID ဆိုတာဘာလဲ? »
My First Laptop, ပထမဦးဆုံး ကွန်ပြူတာ
Posted by Zwe on March 22, 2009
ကွန်ပြူတာဆိုတာနဲ့ ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်နေခဲ့တာ ကြာခဲ့ပြီပေါ့….ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း ငွေစ မတတ်နိုင်…မိဘတွေကိုလည်း အပူမကပ်ချင်တာနဲ့ ဆိုတော့ ဟိုနား ကပ်သုံး ဒီနားကပ်သုံးနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့တာလည်း ဆယ်စုနှစ်တောင် ပြည့်တော့ မပေါ့၊
ဒီရက်ပိုင်းမှ ရေးဖို့ စဉ်းစားမိတာပါ၊ ကိုယ်တိုင်သုံးနေတာကတော့ တော်တော်ကြာပြီပေါ့…ဝယ်ခဲ့တာကတော့ ရန်ကုန် Cyber City ကပါ။ မြန်မာကျပ်ငွေ ဆယ့်သုံးသိန်းငါးသောင်း ပေးခဲ့ရပါတယ်၊ အမှတ်မမှားလျှင် ဒေါ်လာပေါက်ဈေး1300 လောက်ရှိမယ်။ ဝယ်တုံးက ချီတုံချတုံနဲ့ပေါ့ Desktop ဝယ်လျှင်ကောင်းမလား၊ Laptop ဝယ်လျှင်ကောင်းမလားနဲ့ပေါ့၊ စိတ်ရှိလက်ရှိသုံးချင်တာကတော့ Desktop PC ပေါ့ဗျာ….ဒါပေမယ့် ကိုယ်နေတဲ့ ကန်တော်ကလေး ဆိုတာကလည်း ရန်ကုန် တစ်မြို့လုံးမှာ မီးမလာဆုံးလို့ ပြောလျှင်တောင်ရတယ်…..ရက်ကွက်တင်ဆိုးတာလားဆိုတော့…မဟုတ်သေးပါ၊ နေတဲ့လမ်းကလည်း ကန်တော်လေးမှာ အခြားသောလမ်းများနှင့် ယှဉ်ပြောလျှင် မီး အဖြတ်ခံရတာ အများဆုံး လမ်းဖြစ်နေပြန်ရော…..သြ လပ်တော့ပ် အကြောင်းရေးရင်းနဲ့ ချောတောငေါ့ကုန်ပြီ။ ပြောချင်တာက လပ်တော့ပ်ဆိုတော့ ဘက်ထရီပါတယ် မဟုတ်လား၊ ဒက်စ်တော့ပ်ပီစီဆိုလျှင် အင်ဗာတာ ဆိုတဲ့ဟာကြီး ထပ်လိုလာမှာပေါ့….အဲ့သဟာအကြောင်းကြောင့် ဘယ်အရပ် ဘယ်ဌာနပဲ သုံးချင်လျှင် အဆင်ပြေစေရန် အလို့ငှာ ဒက်စ်တော့ပ် ထက် တန်ဖိုးပိုကြီးလှသော HP Pavilion dv 1000 ကိုဝယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့၊ Mobility ကို ဦးစား ပေးလိုက်ရတဲ့ သဘောပေါ့။
င်္Factory Default က ကွန်ပြူတာမှတ်ဥာဏ် 512 MB သာတပ်ဆင်ထားတော့…ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ Software အဆင်ပြေအောင် 1GB memory သို့ upgrade လုပ်လိုက်ပါတယ်။ Microsoft OEM မပါတော့ ဈေးနဲနဲသက်သာသွားတယ်။
Model: dv1625TS with 1GB memory DDR
Place of Purchase: Cyber City Co. Ltd Yangon Myanmar
•	1 Type I/II PCMCIA card slot. I store my Media Remote control. (left side)
•	1 IEEE-1394(Firewire) (right side)
•	3 Universal Serial Bus (USB 2.0) (Two on the right side and one on the left)
•	1 Built in 6-in-1 digital media reader (No Compact Flash)(Right Side)
•	2 headphone-out (front)
•	1 microphone-in (front)
•	1 TV-Out (S-video) (right side)
•	1 RJ-11 (modem) (left side)
•	1 RJ -45 (LAN) (left side)
•	1 External VGA monitor port (left side)
•	1 expansion port for use with HP Expansion Base(sold separately). Available only with Intel Extreme graphics with productivity port (left side)
•	Power jack (in the back)
•	CD/DVD drive (right side)
HP dv1000 specs
•	Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition with SP2
•	Intel(R) Pentium(R) M Processor 740 (1.73 GHz)
•	14.0″ WXGA BrightView Widescreen
•	1GB DDR SDRAM (2700)
•	60 GB 5400 RPM Hard Drive
•	LightScribe 8x DVD+/-RW&CD-RW Combo w/Double Layer
•	Intel(R) Graphics Media Accelerator 900 – Pentium
•	Intel(R) PRO/Wireless 2200BG
This entry was posted on March 22, 2009 at 5:33 pm	and is filed under IT Knowledges. Tagged: Laptop. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.